Ngwongwo ihe mmezi ụgbọala nke abuo - Gaa! AKỤKỌ AKWỤKWỌ (DUAAL // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > sọrọ Learning > Ụlọ ọrụ Mechanics Car abụọ
Na Ngwuputa BSO N'uzo Mechanics Car Dual ị mụtara ịrụ ọrụ n'adabereghị n'ụgbọala, ụgbọala, ụgbọala, wdg. Ị na-amụta iji mee nchọpụta ziri ezi maka ntụpọ, na-edebe ụgbọala ma rụzigharị dịka iwu nke nkà.
Ụzọ nhazi maka ọzụzụ 'Mkpazi Ụlọ Ọrụ Mechanics ' mejupụtara ụyọkọ ndị a:
Ọmụmụ ihe niile
Nhazi oge na ọrụ ngwa ngwa
Na-akwadebe ụgbọ ala maka nnyocha ntanetị na nnyefe
Ozi zuru ezu gbasara ụzọ a na-aga eleta (364 kb, .pdf)
Ị na-aga Ụbọchị 2 maka ụlọ akwụkwọ maka ihe niile ị ga-eme, akwukwo ihe omumu gi, ihe omuma na ihe omuma ndi di na ihe omumu gi. Ị ga-arụ ọrụ ụbọchị 3 ọzọ. Ị na-edebe ihe omume gị na ndekọ gị. Onye nkuzi gị ga - ele gị anya n'ihu na gị, ya na onye nkụzi na ụlọ ọrụ.
Ị na-achọ igodo maka ụgbọala, ụgbọ ịnyịnya na ịnyịnya ígwè? Ịmasị ụgbọala mara mma ọ na-amasị gị? Ị dị njikere ịmụta ihe site n'omume, ọ bụ na ị naghị ajụ ọrụ nkịtị? Ị ga-achọ ịmụta ijikọta na ọrụ?
Iji malite na Ụlọ ọrụ Mechanics Car abụọ ị ghaghị ịbụ onye njide nke otu akwukwo nke 2e degree nke akwukwo abuo, ma ọ bụ mkpebi dị mma nke ndị otu klas.
Mgbe ọzụzụ mmezi Mechanics Car Dual ị nweta ya akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ị nwere, Otú ọ dị ọ bụghị akwụkwọ diplọma nke abụọ. Ya mere, a na-atụ aro ka inwe otu Afọ 7e maka iche iche ịgbaso. N'ụlọ akwụkwọ anyị, ị nwere ike ịmepụta nke ọma na ebe a na-amụ ihe Egwuregwu Nchekwa onwe. Mgbe ọ na-enweta ya diplọma nke mmụta sekọndrị Ị bụ onye ọrụ ọkụ eletrik zuru ezu ma nwee ike ịmalite ọrụ ụlọ ma ọ bụ ọbụna ịmalite azụmahịa gị.
Ugbu a, anyị na-emepe usoro ihe omume Car Care Mechanics. Ị nwere ike itinye afọ 5e. Site na afọ 2019-2020 ga-enwe afọ 6e nke ị nwere ike ịkwaga na afọ 7e maka icheiche.
Gụọ ebe a na tebụl nkuzi nke BSO Ịrụ ọrụ Mechanics Car Dual: